”Waxaan doonaynaa wixii Donnarumma u roon” – Aabaha Gigio oo hadlay – Gool FM
”Waxaan doonaynaa wixii Donnarumma u roon” – Aabaha Gigio oo hadlay
Raage June 23, 2017
(Napoli) 23 Juunyo 2017 – Aabaha Gianluigi Donnarumma ayaa sheegay inuu kaliya “wixii u roon” goolwalahan, kaddib markii sida la sheegayo uu la kulmay macallinka Milan ee Vincenzo Montella.
Warka Alfonso ayaa imanaya kaddib markii uu Gazzetta dello Sport soo weriyay in Montella u safray tuulada Donnarumma deggan yahay ee Castellammare di Stabia, halkaas oo uu kula hadlay waalidka 18-jirkan.
“Waxaan rajaynayaa in xiisaynta saxaafadda ee sheekadani ay dhaqse u xirmi doonto,” ayuu yiri isagoo daba dhigay.
“Ma saamayn doonno go’aanka Gigio, balse waxaan kaliya doonaynaa wixii isaga u wanaagsan iyo farxsaddiisa.”
Milan iyo laacibkan ayaa kala boodey todobaad ka hor markii uu Gigio oo maraya wakiilkiisa sheegay inuusan cusboonaysiinaynin qandaraaskiisa, balse beryahan waxaa soo baxayay warar sheegaya inay dhici karto in arrinta mar kale la xalliyo.
Maxaa uga qorsheysan Ronaldo maxkamadda uu ka soo muuqan doono?
WAR CULUS: Zidane oo fasaxaya mid ka mid ah weeraryahanadiisa BBC si uu u helo Mbappe